Unmetric inoongorora zviitiko zvezuva nezuva pane zvemagariro midhiya enzvimbo dzinopfuura mazana matanhatu nematanhatu emabhuru makuru kubva kumatunhu makumi matatu kubatsira mabhenji kuongorora vakwikwidzi, mabhenji ekuita uye kukwikwidza zvine hungwaru. Unmetric yakagadzira yekutanga chikamu chikamu kuziva social media benchmark mamaki uine anopfuura makumi maviri ehunhu uye huwandu hwemaseturu ekumisikidza yako brand kune vako vanokwikwidza.
Kunyangwe zviuru zvemushandirapamwe zvakaburitswa pane akawanda masocial mapuratifomu mu2014, Unmetric yakasvinwa kuburikidza nezviuru zvemhando uye vakawana akanakisa mishandirapamwe, tweets, mavhidhiyo uye stunts… achivaisa vese mune ino infographic. Dzvanya pane infographic kuti uwane rumwe ruzivo nezve mishandirapamwe pane iyo Unmetric blog.
Hi Douglas, ndinotenda zvikuru nekuratidzira infographic yedu, saka unofara iwe wakaifarira! Zvakatora kuedza kukuru kwevanhu kuidhonza zvese pamwe nekuti iwe unongokanganwa mangani makwikwi makuru anoitika mukati megore rose, panguva yataifunga kuti tapedza, taizokwidza mumwe mushandirapamwe. Kutora runyorwa kwakatora zvachose, chikamu chekugadzira chaive nyore! Wakave newaunoda wega kubva gore rapfuura?
Kukadzi 4, 2014 na5: 30 PM
Chaizvoizvo - Ship My Pants yaive inodiwa. Kwete nekuda kwekusviba asi nekuti yaive yakadzikama yechinyakare brand yaiita chimwe chinhu Chaicho chine njodzi. Ndichiri kuseka nazvo, zvakare.
Wakaona here yavo Dickensian inotora Ship My Pants? "Very expedient"… zvakandisekesa. Iyo Lexus instagram firimu yaive yekugadzira chaizvo, ndainzwa kuti vaifanira kunge vaine mamwe mileage mairi hazvo. Zraft Guy waKraft akarohwa nevakadzi muhofisi medu uye akaverengerwa kunyangwe nekuratidzira kubva kuvashandi vechirume!